Sida ugu habboon ee loo nadiifiyo kabaha cayaaraha | Ragga Stylish
Dhowr maalmood ka hor waxaan ku tusay seddex moodal oo ah kabo isboorti si ay u kabaan labbiskayaga gu 'kasta. Kabahaasi / tababarayaashaas, sida kuwa kale oo badan, Si sax ah ugama jaban yihiin waana inaad isku daydaa inaad daryeesho inta ugu badan ee suurtogalka ah isticmaalka guriga ka dib, sida kabahayaga oo kale. Dad badan, kabaha uu qof walba xirto, iyo sidoo kale xaaladdooda, waxay na siineysaa inaan fahamno sida ay halkaas ku tegi karaan. Laakiin ka tagida fikradahaas, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa sida aan u nadiifin karno kabaha aan jecel nahay inaan uga tagno, ma ahan sida maalinta koowaad maxaa yeelay waa wax aan macquul aheyn, laakiin waa sida ugu macquulsan.
1 Si sax ah u nadiifi kabaha / isboortiga
1.1 Qoryo ama balaastig ayaa ugu dambeeya
1.4 Xulka suufka
1.5 Burush adag
1.6 Cadayga / Clip
Si sax ah u nadiifi kabaha / isboortiga
Runtii inbadan oo idinka mid ah waxay jecelyihiin urta marka aad furto sanduuqa ay kabaha cusubi ka baxaan. Ilaa iyo inta aysan suurta gal ahayn in urta alaabada lagu gado dhalooyinka, waa wax aan macquul aheyn in si kasta oo aan u nadiifino kabahayaga, aan mar labaad u helno urtaas cusub. Laakiin haddii aan sameyno tallaabooyinka soo socda, waxaan awoodi doonnaa inaan uga tagno ficil ahaan cusub, ugu yaraan bilic ahaan.
Qoryo ama balaastig ayaa ugu dambeeya
Si loo isku dayo in loo ilaaliyo qaabka kabahayaga marwalba, waa lagama maarmaan in la helo a hagaajin karo ugu dambeysay oo aan ku ilaalin karno sawirka kabaha mar walba, marka lagu daro noo oggolaanshaha inaan fulino nadiifin aad u raaxo badan. Intaa waxaa dheer, waarta ayaa noo ogolaaneysa inaan dedejino habka qalajinta iyaga, tan iyo waxa ugu dambeeya ee aan sameyno ka hor intaan dib u dhigin ay tahay inaan ka saarno tan ugu dambeysa munaasabadda xigta.
Dukaamada dawooyinka waxaan ka heli karnaa tiro badan oo alaab ah oo noo oggolaaneysa inaan si fudud khafiifino kabaha si aan u nadiifino. Ama waxaan u jeesan karnaa mid ka mid ah abuurkeena, oo aad ku qasinaysid mashiinka mashiinka yar biyo yar, si ay uga dhigto sharooto aad u adag ..
Si loogu nadiifiyo saabuunta dharka kabaha, waa inaan isticmaalnaa burush noloshiisa oo dhan lagu nadiifiyey ciddiyaha. Ama waxaan u isticmaali karnaa caday, taas oo na siin doonta dhaqdhaqaaq weyn markaan nadiifinno kabaha. Waa inaad si fudud u xoqdaa arjiga saabuunta illaa aan ka aragno in wasakhda la nadiifiyey. Maaha inaad xoqdo sidii oo aan isku dayeyno inaan qadaadiicno qadaadiic duug ah.
Meelaha aan ka heli karno godad yaryar, waxay ku habboon tahay in la isticmaalo suufka dhegaha, maadaama ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu mari karo dhammaan wasakhda ku urursan gudaha.
Si aad u nadiifiso kaliga, uma baahnid inaad taxaddar sameyso markaad wax xoqeysid, gaar ahaan haddii ay waqti dheer qaadatay markii aan dib u eegnay. Talaabadan, waa inaan kali saar filimka biyo saabuun leh in cabaar ah u ogolow wasakhdu inay bilawdo inay jilciso. Goor dambe ayaan bilaabi doonnaa in aan kalidoodno sidii aan berri jirin.
Cadayga / Clip
Si aad uga saartid quruurux keligood ku sii jiri kara, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo buraash caday midkoodna (in kasta oo uu ka jilicsan yahay) ama xaashi warqad ah si loo awoodo marin u helaan meelahaas keli ah halka ay ku urursan yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Calzado » Sida saxda ah ee loo nadiifiyo kabaha cayaaraha